KDE Plasma 5.17 waxay la timid horumarinno kala duwan, wax ka qabasho iyo inbadan | Laga soo bilaabo Linux
Xulka wararka oo dhan | | Muuqaal / Shakhsiyeyn
Dhowr maalmood ka hor Mashruuca KDE wuxuu ku dhawaaqay sii deynta deegaanka desktop desktop-ka ee KDE Plasma 5.17. Waa kuwee waxay keeneysaa astaamo iyo horumarro badan oo cusub. Plasma 5.17 waa casriyeyn weyn oo la sii daayay taas waxay hagaajineysaa waxqabadka asalka si loo hagaajiyo qaybo badan astaamaha ugu muhiimsan iyadoo la soo bandhigayo astaamo cusub oo ka dhigaya KDE Plasma mid xasiloon oo bixiya khibrad wanaagsan.
KDE Plasma dad badan ayaa u haysta inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu dhaqsaha badan DE suuqa laga heli karo maanta yaa garanaya sida loo dheelitiro ka faa'iideysiga qalabka. Hadda nidaamku wuu sii dheereeyaa, maaddaama kooxdu u beddelay qoraallada bilowga ah ee Bash illaa C ++, taasoo u oggolaanaysa fulinta isku mar.
Kooxdeeda horumarinta waxay ku nuuxnuuxsatay inay ka dhakhso badan tahay.
Waxyaabo kale oo badan oo la isku halleyn karo, qoraallada bilowga ah waxaa laga beddelay Bash (tartiib tarjum) illaa C ++ (luqad deg deg ah oo la soo ururiyey) oo hadda si iskumid ah ayey u socdaan Taas macnaheedu waa inay qaban karaan hawlo badan isku mar iyagoon fulin midba midka kale. Natiijo ahaan, waqtiga loo baahan yahay in laga baxo shaashadda gelitaanka ee loo maro desktop-ka si buuxda u buuxsamay ayaa si weyn loo dhimay.
Ka mid ah novelties ugu weyn ee noocaan cusub, waxaan leenahay taageero Midabka Habeenkii (nidaamka midabaynta midabka) ee X11. Xafiiska Plasma sidoo kale wuu aqoonsan yahay markaad wax soo bandhigayso oo wuxuu joojiyaa farriimaha ka soo muuqanaya bartamaha muuqaalkaaga muuqaalka ah.
Riwaayad kale waa taas haddii la isticmaalayo Wayland, Plasma hadda waxay bixisaa cabir jajab ah, taas oo macnaheedu yahay in dhammaan sheyadaada desktop-ka, daaqadaha, noocyada iyo kumbuyuutarrada kumbuyuutarrada si dhammaystiran loo qiyaasi karo kormeerahaaga HiDPI.
Taas ka sokow Maamulaha daaqada KWin wuxuu bixiyaa wareejin sax ah oo leh giraangiraha jiirka deegaan ku saleysan Wayland.
X11, awoodda loo adeegsado furaha Meta beddel ahaan in lagu beddelo daaqadaha waa lagu daray (halkii laga beddeli lahaa Alt + Tab). Ikhtiyaar ayaa lagu daray oo xaddidaya adeegsiga astaamaha muujinta oo kaliya goobta bandhigga hadda ee dejimaha dhowr-kormeeraha ah. Saamaynta "Present Windows", taageerada ku xirida daaqadaha riix jiirka dhexe ayaa lagu daray.
Wixii kiiska loogu talagalay interface widget interface, kaas oo lagu hagaajiyay tan version, kaas oo waliba loo habeeyay shaashadaha taabashada.
Markaad mataleyso noocyada, Qaabka tilmaan bixinta RGB waxaa u suurta galiyay asal ahaan ("Isticmaal anti-aliasing" qaabka waxaa lagu suurta galiyay dejinta, "Nooca sub-pixel haya" waxaa loo dejiyay "RGB" iyo "Hinted style" ilaa "Slight").
Sidoo kale waxaa lagu soo qaatay noocan cusub ee KDE Plasma, kaas oo markii la bilaabayay desktop-ka waa la soo gaabiyey.
KRunner iyo Kickoff waxay ku darsadeen taakuleynta bedelida qaybaha jajabka (tusaale ahaan 3/16 inji = 4.76 mm). In kasta oo qaabka isbeddelka loogu beddelayo asalka desktop-ka, waxaa suuro-gashay in la go'aamiyo isku-xigxiga sawirrada (ka hor inta asalku u beddelin si aan kala sooc lahayn).
Waxaa lagu daray awooda adeegsiga sawirka maalinta ee adeega Unsplash asalka desktop oo leh awooda xulashada qayb.
Nidaamka Monitor wuxuu ku darey taageerada muujinta macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan cgroup si loo qiimeeyo xadka kheyraadka ee weelka. Nidaam kasta, tirakoobyada ku saabsan taraafikada shabakadda ee la xiriirta ayaa la soo bandhigaa. Lagu daray awooda lagu eegi karo tirakoobka NVIDIA GPU.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato noocaan cusub, waad la tashan kartaa xiriirka soo socda.
Sidee loo rakibaa KDE Plasma Linux?
Kuwa xiiseynaya inay awoodaan inay ku rakibaan qaabkan cusub ee deegaanka, waxay ku samayn karaan iyagoo ku amraya amarradan soo socda terminal.
Kuwa adeegsada Debian, Ubuntu iyo waxyaabaha la midka ah, kaliya waa inay qoraan waxyaabaha soo socda:
sudo apt-hel rakibidda plasma-desktop -y
Loogu talagalay dadka isticmaala Arch Linux iyo noocyada:
Fedora iyo deriska:
kooxda sudo dnf -y waxay rakibtaa "KDE Plasma Workspaces"
sudo zypper rakibi -t hannaan kde kde_plasma
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » KDE Plasma 5.17 waxay la timid horumarinno kala duwan, hagaajin iyo inbadan
Waxay ku ogaadaan u nuglaanta Sudo oo u oggolaanaysa isticmaaleyaasha aan loo idman inay u noqdaan xidid
Nooca cusub ee Ubuntu 19.10 Eoan Ermine horay ayaa loo sii daayay